"कुनै पाठ, खाने को लागि खेल र मिठाई धेरै।": बच्चाहरु गृहकार्य निबंध दिइएको गर्दा "आदर्श स्कूल," तिनीहरूलाई आधा ठ्याक्कै लेखे वास्तविकता मा, तथापि, यो विषय धेरै हिज्जे छ।
तपाईंको विद्यालय बारेमा लेख्न
सायद तपाईं स्कूल जान मन छैन। , बिहान उठ, आफ्नो डेस्क मा घण्टा बसेर जब विन्डो वा आकर्षक पुस्तक लागि प्रतीक्षा घरमा ठूलो मौसम। त्यसपछि भोलि लागि तयारी गर्न केही घण्टा खर्च गर्न आवश्यक छ। तर विषय "मेरो मनपर्ने स्कूल" मा एक निबंध लेख्न गर्न, तपाईं पक्कै कुनै पनि विद्यालयमा अवस्थित कि लाभ सम्झन सक्नुहुन्छ।
यो साथीहरू, सहपाठीहरू, भोजन कोठामा स्वादिष्ट muffins, रोचक अतिरिक्त वर्ग र थप हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि: "म विश्वास मेरो स्कूल कि - सबै भन्दा राम्रो। तथ्यलाई सबै धन्यवाद कि शिक्षकहरू हाम्रो वर्ग सुरु देखि अनुकूल बनाउन सक्षम थिए। हामी सबै पहिलो ग्रेड देखि मित्र गरिएको छ। हामी एक अर्को पहाड लागि खडा। त्यसैले, पनि सबैभन्दा नीरस पाठ रोचक किनभने मेरो घनिष्ठ मित्र को एक नम्बर। "
स्कूल आफ्नो मित्र बारेमा
आफ्नो साथीको स्कूल शिक्षा केही गैर-मानक दृष्टिकोण प्रयोग भने, यो आफ्नो निबंध मा वर्णन गर्न सम्भव छ।
गैर-मानक दृष्टिकोण लागि सिक्ने छन् के सिस्टम मा, यो जस्तो गर्दैन बिल्कुल सबै समावेश गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि नोटबुक सट्टा विद्यार्थी - पाठ्यपुस्तकहरु कम्प्युटर सट्टा - ट्याब्लेटको। वा स्कूल कक्षाकोठामा आन्दोलन को स्वतन्त्रता अभ्यास छ, र बच्चाहरु सुरक्षित शिक्षक अनुमति कि बिना पनि विन्डो वा बोर्ड आउन सक्दैन। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो दृष्टिकोण तपाईंलाई रुचि हुनुपर्छ। आखिर, विषय मा एक निबंध "मेरो सपना स्कूल" तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ मात्र के समावेश गर्नुपर्छ।
यस प्रकारको को संरचना, तपाईंले लेख्न सक्नुहुन्छ: "इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रयोग पाठ्यपुस्तकहरु र नोटबुक स्कूल सट्टा मेरो मित्र Bory। यो एक ब्रिफकेस पूरा गर्न आवश्यक छैन किनभने यो धेरै सुविधाजनक छ। प्रविधी प्रगति साथ राख्न छोराछोरीलाई मदत गर्छ। र तपाईं बिल्कुल कुनै पनि पुस्तक ट्याब्लेटमा अझै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। स्कूल पुस्तकालय गाह्रो ल्याउन। म मेरो विद्यालयले आज नै थियो चाहनुहुन्छ। तसर्थ, निबंध "मेरो सपना को स्कूल," म उनको स्कूल मित्र बारे लेख्न निर्णय गरे। "
प्रत्येक विद्यालयमा भर्ना भएका बच्चाहरु बारेमा पुस्तकहरू पढ्न। कसैले "Harry Potter", "Naruto" मा को रूप मा, निन्जा को कला सिक्ने छ जो जस्तै, एक जादू स्कूल छ, र कसैले एक पनि अधिक शानदार विश्व छनोट। यसलाई जो स्कूल तपाईं पुस्तकमा वर्णन कुरा छैन। अधिक महत्वपूर्ण कुरा, तपाईं के समावेश गर्नुहोस्। यो रूपमा त्यहाँ पाठ हो, र किन त्यहाँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, स्कूल कोड, स्कूल जीवन, यन्त्र वर्णन गर्न राम्रो हुनेछ।
विषय मा एक निबंध समावेश हुन सक्छ कि केही विचार "को परी कथा मेरो स्कूल": "म हैरी पटर संग जादू सिक्न चाहन्छ। आफ्नो स्कूल सुन्दर CHATEAU रोचक कुराहरू पूर्ण मा स्थित छ। रहस्यमय वस्तुहरु सबैतिर शक्ति छ। त्यसैले वर्ग असम्भव छ मा नरमाइलो। "
तपाईंको विद्यालय विचार
धेरै छोराछोरी, निबन्धहरू लेख्ने निकै कठिन हो सीमितताको विषयमा भने, शिक्षक सधैं कुनै पनि विशेष काम पूरा र प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। तपाईं हृदय देखि आ प्रस्ताव सयौं लेख्न सक्ने स्थानिक विषय - यो सजिलै प्रदर्शन सबै वर्ग को विद्यार्थी कार्य हो।
विषय "मेरो स्कूल" मा एक निबंध शिक्षक सपना सुरु तपाईंको आँखा बन्द, तपाईंले आफ्नो सबै कल्पना जडान गरौं भने र तथापि, एक विशिष्ट ध्यान छ। तपाईं राम्रो महसुस जसमा स्कूल संग सिद्ध संसार आविष्कार। आएको छ सबै तल लेख्नुहोस्। जो कोहीले कल्पना र काल्पनिक स्कूलमा आफ्नो अध्ययन डुबाउनुहोस् सक्ने विवरण प्रशस्त समावेश गर्न पक्का हुनुहोस्।
तपाईं कसरी आफ्नो स्कूल संग आउन सक्छ:
तपाईंको विद्यालय भएका पेशेवरों को सूची बनाउन।
यस पढ्ने किताबहरु सबै विद्यालय विचार, चलचित्र हेर्नुभयो।
तपाईं स्कूल निर्देशक थिए भने तपाईं के भनेर सबै लेख्न।
आफ्नो कहानी को हीरो केही downsides थप्न सामना सक्छ निश्चित हुनुहोस्।
कसरी एक निबंध लेख्न
प्रसन्न यो काम - विषय "मेरो स्कूल" मा एक निबंध लेख्न। तर तपाईं लगनशीलता यो कार्य गर्न प्रतिक्रिया भने, तपाईं एक उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्छन्।
केही सजिलो नियम तपाईं सही निबंध लेख्न मदत गर्न सक्छ:
छोटो रूपरेखा तयार। तपाईं परिचय, मुख्य भाग र अन्त देख्न चाहनुहुन्छ के वर्णन।
योजना विस्तार, यो विस्तृत बनाउन।
लेखन नै केहि समय विचार गर्नुहोस्। तपाईं लेख्न चाहनुहुन्छ के ठीक निर्णय।
कि आफ्नो टाउको मा आउछन् विचार, मस्यौदा तय। तपाईं लेखन जब उनि उपयोगी हुनेछ।
को निबंध "मेरो स्कूल" यति गाह्रो छैन किनभने, चिन्ता छैन।
कुनै मामला मा आफ्नो स्कूल दुरुपयोग छैन। पनि स्कूल बेफाइदा धेरै भने, जहाँ तपाईं वर्ष आउन खर्च ठाँउ दोष छैन।
मस्यौदा लेखन, यो फेरि घण्टा एक जोडी पछि एक पटक, र त्यसपछि पढ्नुहोस्।
त्यहाँ पुनरावृत्ति, तार्किक, व्याकरण त्रुटिहरू छ भने जाँच गर्नुहोस्।
प्रत्येक अनुच्छेद सजिलै अघिल्लो एक देखि प्रवाह छ।
एक निबंध लेख्न, तपाईं सिद्ध स्कूल मा सपना र सायद भविष्यमा एक पुस्तक लेख्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
निबंध-तर्क: उदाहरण। एक निबंध-तर्क कसरी लेख्न
नवीन शैक्षणिक प्रविधिहरू - सफल प्रशिक्षण गर्न महत्वपूर्ण छ?
केही सिफारिसहरू: कसरी राम्रो लेख्न सिक्न
बयलर "ARISTON": समीक्षा, मोडेल, निर्देशन, सम्भव malfunctions
रिमोट कम्प्युटरको लागि कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ। दूर पहुँच
के भने म "सम्पर्क" मा फन्ट परिवर्तन?
कुहिरो के हो र यसलाई कसरी उत्पादन छ?
"Eufillin": समीक्षा। "Eufillin": प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ